Antanimena : Baomba sandoka nampisahotaka ny mponina – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → février → 12 → Antanimena : Baomba sandoka nampisahotaka ny mponina
Tsy natao ambanin-javatra ny fahitana ilay sakaosy nampiahiahy. Omaly tokony ho tany amin’ny 11 ora tany ho any, nisahotaka ny teny Antanimena fa nisy sakaosy nampiahiahy teo amin’ny sisin-dalana ampitan’ny fivarotan-dasantsy Total. Ny voavao vaoray no nahalalana fa tamin’io maraina io, nisy olona nitondra moto naniraka ankizy iray hanatitra sakaosy ao amin-dry Masera. Nomeny vola io iraka io, araka ny loharanom-baovao. Rehefa tonga tany amin-dry masera anefa dia voalaza fa nampanahy azy ireo ilay sakaosy miloko mainty. Tsy notazoniny izany fa naniraka olona hafa izy ireo hanatitra an’ilay sakaosy any amin’ny polisy. Teo Antanimena, nisy ireny polisy mpanondro lalana ireny ary dia io no nomena ilay zavatra. Toa mailo ihany koa anefa izy ka nanapa-kevitra ny hampandre ny lehibeny ao Tsaralalana. Teo dia nihazakazaka ny raharaha. Tsy niandry ela, tonga teny an-toerana ny avy ao amin’ny Emmo-Reg, ny manampahaizana manokana amin’ny fitsirihana baomba mba tsy hampipoaka azy. Vao raikitra moa ny fanairana ireo mpitandro filaminana ireo dia efa notapahana tsy azo naleha intsony ny lalana. Nanomboka nitangorona lavitra ny olona. Rehefa nanao ny asany ny “démineurs” nanokatra ilay sakaosy dia tamin’izay no nahitana fa rano anaty tavoahangy plastika, kahie ary karatra no tao fa tsy baomba araka ny niheveran’ny maro azy.
Teo vao samy gaga ny rehetra fa tsy baomba no tao anaty sakaosy. Samy nanana ny filazany moa ireo olona marobe. Re teny an-toerana io karazana resaka rehetra io. Samy nahatsiaro ilay grenady nisy nanipy ary nahafaty olona teny Anosy Kely. Ny tsy fantatra tamin’ity indray mandeha ity, tena sakaosy saika homena an-dry Masera marina ve ilay izy sa zavatra nentina nampihoroho sy nampisavoritaka ny sain’ny olona fotsiny ? Efa mandeha ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Rovitra akanjo. Rehefa fantatra ary fa tsy zavatra mety hipoaka ny tao anaty sakaosy dia samy nandeha nitady lalana avokoa ny rehetra. Nisy mpaka sary iray anefa avy hatrany dia tsy navela nandeha fa nosintonin’ny mpitandro filamina mafy hiverina. Vokatr’izany, rovitra mihitsy ny akanjony. Raha nahita izany ireo namany marobe dia samy saika haka sary io toe-javatra io. Tsy navelan’ireo nandrovitra ilay akanjo natao anefa ny fanakana ny sary. Nanomboka nanatona sy nitangorona ireo olona marobe teny an-toerana. Farany moa, dia niparitaka ihany ny rehetra.